Qaramada Midoobe, ayaa waxay Dowladda Somaliya ugu yeertay in Maxkamad la soo taaggo kuwii dadka barakacayaasha ihi maalintii Isniinta ku dilay Degmada Dayniile – STAR FM SOMALIA
Qaramada Midoobe, ayaa waxay Dowladda Somaliya ugu yeertay in Maxkamad la soo taaggo kuwii dadka barakacayaasha ihi maalintii Isniinta ku dilay Degmada Dayniile
Qaramada Midoobe, ayaa waxay Dowladda Somaliya ugu yeertay in Maxkamad la soo taaggo kuwii dadka barakacayaasha ihi maalintii Isniinta ku dilay Degmada Dayniile Ee Gobolka Banaadir.
Askar ka tirsan Ciidanka Daraawiishta Dowladda, ayaa isku maandhaafay kaarar lagu waday in loo qaybiyo barakacayaal markaasi safaf ugu jiray, sidii kaararkaasi ay cunada aan bisleen ugu qaadan lahaayeen. Gacan ka hadal xilligaa dhex maray askarta, ayaa sababtay dhimashada 10 ruux iyo dhaawaca 13 kale.
Kaaliyaha Xoghayaha Guud Qaramada Midoobe, Ivan Šimonović oo Talaadadii shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho, ayaa waxa uu ku baaqay in la ciqaabo kuwii falkaasi gaystay.
“Aan iraahdo carada ka dhalatay dilalka iyo dhaawacyada loo gaystay dad rayid ah oo aan waxba galabsan, iyagoo Isniintii raadinaayay gargaar bani’aadanimo Magaalada Muqdisho.” Ayuu yiri Kaaliyaha.
“Waxaan doonayaa in aan muujiyo dareenkayga shakhsiyaadka galay dembigan, waa in la soo cadeeyaa, oo la ciqaabaa. Kuwaan caawinaadda helaayay waa kuwo nugul, waa in la horumariyaa xil iska saaridda helitaanka gargaarka bani’aadanimo, ee ay u baahan yihiin.” Ayuu yiri Kaaliyaha.
Ivan Šimonović, ayaa yiri “Xadgudubyada ka dhanka ah sharciga xuquuqda aadanaha keliya ma waxyeeleynayaan sumcadda askarta hawsha ku jirta, sidoo kale waxay go’doomineysaa shacabkii fillaayay inay difaacayaan. Sidaasi daraadeed waxay saamaynaysaa guul laga gaaro dagaalka ka dhanka ah argagaxisada.”
Ivan Šimonović waxa uu intaa ku daray “Loolanka kale ee wajahayaan Madaxda Somalidu waa ilaalintu xuquuqda dadka gudaha ku barakacay iyo qaxootiga soo laabanayaa. Hubinta inay si nabad ah ku soo laabtaan iyo in hantidoodu la xaqdhawro.”
Sarkaalkan, ayaa wuxuu laamaha ammaanka Somaliya uu ku booriyay inay xoojiyaan tallaabooyinka, ay kaga hortaggayaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha.
Waxaa xalay dib loo furay Safaaraddii Somaliya ku laheyd Magaalada Washington Ee Xarunta Mareykanka, ka gadaal muddo 24 sano ah
Ciidamo boolis ah oo tababar loogu soo xiray magaalada baydhaba